ကိုပေါရဲ့ ပိတောက်ရိပ်၊ Ko Paw's Padauk-Yeik: “ရှာပုံတော်”
အချိန်ကိုက်ပဲ ။ ကလူသစ်ခုမှ အိမ်ရှာနေတာဗျ။ COV အော်ပျံလန်နေတာပဲ။ စိတ်ညစ်တယ်။
အော်- ကိုပေါ နဲ့မဒမ်ပေါ လည်း..စင်ကျာပူရီယန်ရွှေ ပီပီသသ ဖြစ်သွား ပီကိုး။း)
အိမ်တတ် လုပ်ဖို့ကျန်သေးတယ်နော်။ အိမ်တက် မလုပ်ရင်..မပြည့်စုံသေးဘူး။ စလုံးမှာ..အပတ်တိုင်း..အိမ်တက်..မင်္ဂလာဆောင်.. ဘုန်းကြီးကျောင်းဆွမ်းကျွေး..တခုခု ရှိ နေတတ်တာ.. သတိရတယ်။
>>> သူတို့က စင်္ကာပူလူမျိုးထုံးစံ၊ အသက်ကြီးလာတော့ စုငွေမလုံလောက်လို့ ငွေပိုငွေလျှံလေးရအောင် လက်ရှိအိမ်ကိုရောင်းပြီး ပိုဈေးပေါတဲ့ နေရာကို ရွှေ့ရတော့မှာလေ။
For you, you can always sell the house and move to the Golden land. The house there will be surely better than what you have now :) With no electricity, no cell phone and no MRT station -- complete privacy -- don't you love the 'Golden' land? :)
Just to make your day brighter, hehe :) All the best,
စလုံးမှာနေတာ ၁၀ နျစ်ရှိပါပြီး အိမ်မဝယ်ရသေးပါ။ ပြန် ကာတောင်နီးပေါ.။ ဝမ်းသာပါတယ်ဗျိူ။ အဆင်ပြေပါစေ.
အိမ်ဝယ်ဖို့အရေး တော်တော်ဂျီးများတာပဲ။ နာတောင် အိမ်ဝယ်ရင် ဒီလောက်စဉ်းစားမှာ မဟုတ်ဘူးး။
ဒါနဲ့ ဖုန်းရွှေကောင်းမကောင်းလဲ စစ်အုံးနော အတိုကြီး :P
ကျွန်မ seniorအကိုကြီးတယောက်က အိမ်အလုံး၄၀ကျော် ကြည့်ြ့ပီးမှ အိမ်ဝယ်ဖြစ်သတဲ့…ရုံးကသူငယ်ချင်းတယောက်ကတော့ အိမ်အလုံး၇၀ကျော် ကြည့်ြ့ပီးမှ အိမ်ဝယ်ဖြစ်သတဲ့… သူတို့ ပွဲစားတွေ သနားစရာ… ကျွန်မကတော့ ၁၀လုံးကြည့်ပြီးဝယ်ဖြစ်သွားတယ်… သိပ်ဂျီးများလို့ မရဘူးလေ… ပိုက်ဆံမှမရှိတာ…
ဒါထက်… ကိုပေါပရိုဂရမ်upgradeလုပ်ဖို့ လိုပြီ… ခေတ်အစားဆုံးတခုကျန်ခဲ့တယ်လေ…
ဒီမှာ ရှိ တဲ့ အိမ် တိုင်း အ ရပ် ၈ ဘက် ကို တ မိူး မ ဟုတ် တ မိူး အား လံုး လှည့် နေ တာ လို ချင် တာ ရ ဖို့ ခက် ပါ တယ် ။ ငွေ လိုက် ရင် တော့ အ ကောင်း ဆုံး ပါ ဘဲ ........ အား လုံး အ တွက် ပေါ့...
အိမ်မှာ အဲဒီအချက်တွေ ရှိရမယ်လို့ အဲဒီလောက် မစဉ်းစားဖူးပေါင်ဗျာ။ လိုက်ကြည့်ရမှာတွေ စိတ်မရှည်လို့ တစ်အိမ်ပဲ ကြည့်ခဲ့တာ။ အခုတော့ တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးကြည့်လိုက်တော့ အားလုံး ကိုက်နေသားပဲ။ (ဟိ..တယ်တော်တဲ့ နာကွ.။)